मुखै रसाउने चुकाउनी खान मन छ? यसरी बनाउनूहोस् :: Setopati
आजभन्दा झन्डै ४१ वर्षअघि नै विदेशी भान्छामा प्रवेश पाइसकेको चुकाउनी साकाहारी र बनाउन सजिलो परिकार हो।
संसारका ७५ वटा चर्चित ‘मुखै रसाउने आलुका परिकार’ विशेषांककारुपमा गत वर्ष निस्किएको पुस्तकमा चुकाउनी समावेश छ। यो नै नेपाली खानाले सम्भवतः पहिलोपल्ट प्रवेश पाएको हुनसक्ने होटल व्यवसायी कर्ण शाक्यको भनाइ छ।
विदेशसम्मै पुगे पनि नेपालभर भने चुकाउनीको स्वाद फैलिन भ्याएको छैन। कतिले नाम सुनेका मात्र छन्, स्वाद चाखेका छैनन्। कतिले यसलाई ‘पाल्पाली अचार’ का नाममा मात्र चिन्छन्। पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मीतिरबाट बसाइँ सरेर विभिन्न क्षेत्र पुगेकाहरूले चिनजान–नातागोतालाई चखाएसँगै चुकाउनीको स्वाद फैलिएको हो। पछिल्लो समय बढेको आन्तरिक पर्यटनले यसको स्वाद धेरैको जिब्रोमा अडेको छ।
मुखै रसाउने चुकाउनी आफैं बनाएर जिब्रो पट्काउने प्रयास गरेर पो हेर्ने कि!
कागती– एउटा वा चुक अमिलो– एक ठूलो चम्चा (दही अमिलो नभएमा)
भान्छामा छिरिसकेपछि सबैभन्दा पहिले आलु उसिन्न भाँडो बसाल्नूस्। आलुका अरु अचार त पक्कै बनाउनुभएको छ! हो त्यत्तिकै गिलो भएपछि आलुलाई मझौला टुक्रामा काट्नूस्। फराकिलो भाँडोमा राख्नूस्, ताकि मोल्दा सजिलो होस्।
आलु उसिनिरहेको समयमा तपाईंले अरु साम्रगी ठीक पारिराख्नूस्। जस्तो कि, तिल भुट्नूस् र मसिनोगरी पिस्नूस्। दही तयारी अवस्थामा होस्। मसिनो गरी प्याज काटिराख्नूस्। (प्याज नराखे पनि चुकाउनी बनाउन सकिन्छ)
भाँडोमा काटेको आलु तयार छै हैन? त्यसमाथि काटेको प्याज राख्नूस्। नुन, भुटेको तिल र दही आलुमाथि खन्याइदिनूस्।
अब तोरीको तेल तताउन एउटा भाँडो चुल्होमा बसाल्नूस्। (सूर्यमुखी या भटमासको तेल भए पनि हुन्छ।) तेल तातेपछि रातो खुर्सानी र मेथी फुराउनूस्। मेथी र खुर्सानी गाढा रातो हुँदै कालो हुन नपाउँदै बेसार राख्नूस्। बेसारलाई कालो हुन नदिनूस् है!
देख्दैमा मुख रसाउने भएन त!
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कात्तिक १, २०७५, ०६:०२:००